Ny Tantarantsika - Far East
Niorina ny Far East
Nasain'ny Governemanta Shinoa hamolavola ny fenitry ny indostrian'ny "Fitaovana famatsian-tsakafo azo simba".
Nahazo ny medaly volamena "Tenth China Invention Expo".
Nahazo ny loka "China Advanced Packaging Enterprise" loka
Far East dia nahomby tamin'ny fampivoarana fitaovana SD-PP9 Series izay ny angovo voalohany amin'ny famokarana kobam-bary vita amin'ny lafarinina ao Shina.
Nahazo ny hany mpamatsy kojakoja fanariana manary tontolo iainana ho an'ny Lalao Olympika any Sydney
ZS-CX (SD-P08) Mitsitsy angovo feno automatique vita amin'ny latabatra vita amin'ny latabatra dia novolavolaina, izy io no milina fanasan-damba vita amin'ny pulp automatique voalohany amin'ity orinasa ity.
Vita soa aman-tsara novolavolaina mitsitsy angovo mandeha ho azy feno koba vita amin'ny latabatra
Taranaka vaovao amin'ny latabatra fiasana lehibe roa dingana feno ho azy Pulp vita amin'ny fitaovana latabatra LD-12 andiany.
Nomen'ny Vaomieram-Pirenena momba ny Fampandrosoana sy Fanavaozana an'i Shina ho: Tetikasa Fitahirizana Angovo Indrindra, Tetikasa Fampisehoana Lehibe momba ny Toe-karena Circular sy Fiarovana ny Loharano.
Nahazo ny loka "Top 50 Chinese Paper Packaging Company".
Ny teknolojia Advanced dia manana mari-pankasitrahana sy patanty iraisam-pirenena amin'ny International Expos